Maitiro ekuona maasterisk kana uchipinda password yedu mune iyo terminal | Linux Vakapindwa muropa
Chaizvoizvo vese vashandisi veLinux vakazviona, kana kuti hatina kuzviona: kana uchiita rairo inoda kushandiswa kwepassword, kana uchinyora hapana chinoonekwa. Kekutanga kuzviita, handina kushamisika, nekuti chipangamazano wangu akange andinyevera asi, kunyangwe zvakadaro, zvaishamisa nekuti tese tajaira kuona chimwe chinhu chichiwoneka, senge madhodhi pane manhamba netsamba. Kana izvi zviri izvo zvaunoda, mune ino dzidziso isu tinokudzidzisa iwe maitiro ekuona maasterisks kana uchipinda password mune terminal.
Kunyange zvakadaro maitiro acho ari nyore uye akachengeteka, muchokwadi isu tichagadzira kopi yekuchengetedza yeiyo huru faira, ini ndinoda kuyambira kuti chimwe chinhu chingakanganisika nekuti hapana 100% yakachengeteka. Wese munhu ane mhosva yezvaanoita, asi ini ndichazviita newe kuratidza kuti zvinoshanda. Ini ndichazviita neUbuntu 18.10 pane yangu Lenovo Ideapad 100-15IDB laptop, yangu chengetedzo uye isina simba laptop. Kana iwe uchitya, unogona kutanga kuita bvunzo mune Live Session kubva kuUSB.
Saka iwe uchaona maasterisks panzvimbo yenzvimbo dzisina chinhu
Chinhu chekutanga chatichaite ikopi yekuchengetedza yefaira inoitisa hunhu uhu. Kuti tiite izvi tinovhura chinongedzo nekiyi musanganiswa Ctrl + Alt + T. Kana yako sisitimu yekushandisa ikasashandisa uyu murairo, unogona kuvhura iyo terminal kubva kune ekushandisa menyu.
Zvakanaka. Na «bhandi repachigaro ratosungwa», tinoita uyu mumwe murairo kuvhura iyo faira:
Isu tinotsvaga mutsara unoti "Defaults env_reset".
Isu tinowedzera ", pwfeedback", sezvamunoona mune iyo skrini. Izwi iro rinoreva: pw = password uye feedback = mhinduro chiratidzo.
Ipapo isu tinodzvanya Ctrl + O kuchengetedza, Pinda kuti ubvume uye Ctrl + X kuti ubude.
Chekupedzisira, tinoongorora kuti shanduko dzinoshanda.
Kuti tiidzose sepamberi pekuti isu tinogona kuita maitiro mukudzosera kumashurendiko kuti, chingobvisa iwo mavara ", pwfeedback" yatakawedzera padanho rechishanu.
Shanduko iyi inobatsira here? Zvakanaka, zvinobatsira hazvisizvo, asi muLinux tinogona kuchinja chinenge zvese Uye kana sarudzo iyi iripo, imhaka yekuti vamwe vashandisi vanofarira. Ini pachangu, zvinoshanduka zvishoma kwandiri kana ndikaona chimwe chinhu kana kwete nekuti ini ndinogara ndichiisa mapassword angu kamwechete; Kana ini ndichifunga kuti chimwe chinhu chakanganisa, ini ndinonyora zvakare kubva pakutanga. Iwe unofarira maasterisks kana dzisina nzvimbo?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Maitiro ekuona maasterisks kana uchipinda password yedu mune terminal
VirtualBox 6.0.6 yakaburitswa nerutsigiro rweLinux Kernel 5.0 uye 5.1